तीज : तडकभडक होइन, रचनात्मक बनाऔँ - Jhapa Online
तीज : तडकभडक होइन, रचनात्मक बनाऔँ
आज तीजको अवसरमा केही लेख्न पाउँदा मन प्रफुल्लित छ । सर्वप्रथम तीजको सबैलाई शुभकामना– महिला र पुरुष दुवैलाई । महिलाले तीज आफ्नो श्रीमान्को दीर्घायू र समृद्धिको लागि गर्छिन् भने पुरुषले पनि महिलाको सुख र दुःखमा दिनरात नभनी साथ दिएका हुन्छन् । अनि यी दुई श्रीमान् र श्रीमती खुसी साथ रहेको घर नै स्वर्ग कहलिन्छ । त्यसैले श्रीमतीको खुसीमा खुशी भई दिने तमाम श्रीमानहरुलाई ह्याप्पी तीज । श्रीमान्को सुख र दुःखमा इमान्दारीपूर्वक साथ दिने हरेक श्रीमतीलाई पनि ह्याप्पी तीज ।
तीजको सन्दर्भमा जे–जस्तो किम्बदन्ती र परम्परा रहे पनि आज तीज मनाउने र मान्ने शैलीमा धेरै नै परिवर्तन भएको छ । महिलाको सोच, कार्यशैली र समयको आधुनिकीकरणसँगै तीज मनाउने तरिका दिन प्रतिदिन भड्किलो हुँदै गएको छ । तीजको नाममा भड्किलो पार्टी वा कार्यक्रम गरेर मनाउन थालिएको छ । एक थरि महिलाले वर्ष दिन पुरुषले रमाइलो गर्ने एक दिन हामी पनि गरौँ न भन्ने गर्छन् । अर्को थरिले समाजमा आफ्नो सम्पन्नताको छाप देखाउन ठूलो होटेलमा भेला भएर महँगो पार्टीमा रमाउन शान ठान्छन् ।
जाँड पिउनु सभ्यताको प्रतिक । वियर, वाइन, अन्य चिसोको साथ कैयन् परिकार । नाच र गान । यसैगरी यो तीज दिनदिनै महँगो हुनु र मनाउने शैली आधुनिकीकरणको नाउँमा विकृत हुँदै गएको छ । तीजको रमझममा पश्चिमेली शैली मिसिँदै छ । आजभोलि साउन सुरु देखि नै सहरी क्षेत्रमा तीजको रौनक सुरु हुन्छ । आफूलाई आधुनिक र सहरिया मान्ने महिलाहरू अरुको देखासिकी र प्रतिस्पर्धाका लागि गरगहना र कपडा लगाउने गर्छन् । महँगो सारी र गहनाले गर्दा आर्थिक भार बढिरहेको छ । यो तीजका नाममा भित्रिएको नकारात्मक पक्ष हो । यस्तो व्यवहार र कामले समाजलाई नै असर पारिरहेको हुन्छ ।
यी कुराहरु मनन् गर्दा तीज मनाउने चलनलाई अर्को रुप दिँदा कसो होला ? तीजको अवसरमा भड्किलो पार्टी वा कार्यक्रम गरेर पैसा मास्नु भन्दा ती पैसाहरु कुनै सामाजिक कार्यमा लगाउँदा अझ राम्रो हुन्छ कि ? आफ्नै समाजको निर्धन महिलाको सीप अभिबृद्धि गर्न, व्यवसाय गर्न, शिक्षा दिन जस्ता कार्यमा खर्चिँदा कसो होला ? ठूलाठूला होटलमा रमाइलो गर्ने नाउँमा दिनभरि खाली गीत गाउने, नाच्ने, विभिन्न परिकार खाने र खुवाउने कार्यक्रममा महँगो सारी र आभूषणको मानौ प्रतियोगिता नै चलेको हुन्छ ।
सामाजिक आडम्बर देखाउन गरिने यस्ता अनुत्पादक खर्चले पारिवारिक बोझ र जीवनयापन शैलीमा असर पर्न गएको छ । गरीब र धनी बीचको दुरी बढ्नुको साथै जीवन केवल देखासिकीमै सीमित भएको छ– जुन समाजको लागि नराम्रो पक्ष हो । बरु आफ्नै टोल वा समाजको समस्या समाधान गर्न खुलेर छलफल गर्दा केही निष्कर्ष पक्कै निस्किन्छ । महिला भएको नाताले बढ्दै गरेको नानीहरुलाई शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, बालअधिकार, नैतिक आचरणका बारेमा खुलेर कुरा गर्दा वर्षको कमसेकम एक दिन पनि राम्रो काम गरिन्छ ।
हाम्रो समाजमा किशोर–किशोरीहरुमा आत्मविश्वासको कमी देखिन्छ र धेरै जसो यी उमेरका मानिसहरु दिवास्वप्नमा रमाउने गर्दछन् । मिहिनेतमा विश्वास गर्नुभन्दा आमाबुबाको कमाइ खर्चिनेमा गर्व गर्छन् । महँगो लवाईखवाई, फेसनदार पहिरन, हातमा महँगो मोबाइल र सेल्फी नै सुखमय जीवनको शान ठान्दछन् । अझ सोसल मिडियामा आउने सस्ता प्रतिक्रिया, लाइक र डिस्लाइकमा घण्टौ खर्चिने समूहलाई आफ्नो जीवनप्रतिको जिम्मेवारी याद हँुदैन । क्षणिक मनोरञ्जनका लागि झिल्के लभमा परेर आफ्नो जिन्दगीको अमूल्य समय र उद्देश्यलाई महत्व नदिने जमातलाई कस्तो जीवन महत्वपूर्ण र सुखमय हुन्छ भनि हामीले भोगेका कतिपय मार्मिक अनुभवहरु भनि दिँँदा अझ वेश होला कि ? त्यो एक दिन वा एक हप्ता यसमै खर्चिने कि ?
धेरै कठिनले आर्जेको धन अनुत्पादक कार्यको लागि खर्चिनु एक असल समाजको शोभा होइन । यसले विकृति मौलाउँछ । यस्ता सामाजिक चाडपर्वमा गरिने तडकभडक र फजुल खर्च रोक्नको लागि सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन र नियमावली २०३३ जारी भएको छ । यसअनुसार चाडपर्वमा अनावश्यक तडकभडक गर्न नहुने तथा छोरीबेटीको घरमा दर पठाउँदा पनि आ–आफ्नो प्रचलन एवम् परम्पराअनुसार मिठाईं र फलफूल आदि बढीमा दुई किस्तीबाहेक अन्य सामग्री पठाउनु हुँदैन भनिएको छ । तर, अहिले निकै परिवर्तन भएको छ यस चलनमा । दर पठाउने चलन निकै खर्चिलो भएको छ । यस्ता विकृति मौलाउन दिनु हुँदैन यसले समाजलाई नै कुरुप पार्छ । जस्तै, दाइजो वा दहेज प्रथाले कतिपयको जीवनलाई कुरुप बनाएको छ । तीजको आडम्बर त्यतिसम्म नपुग्ला तर तीज जस्तो महान पर्वको गरिमा कायम रहने आचरण गर्नुपर्छ ।
कसैकसैको घरमा जाँडरक्सीको समस्याले घर बिग्रिरहेको हुन्छ । तीज जस्तो बेलामा पनि श्रीमानकै खर्चिने बानीले हैरान श्रीमतीलाई दरको व्यवहार मिलाउन कम्ती गाह्रो हुँदैन । दिनमा सभ्य र शिक्षित देखिने श्रीमान् राति मातेर धुत्त भएर आफ्ना स्वास्नी र बालबच्चालाई भरपुर टेन्सन दिएको हुनसक्छ । आर्थिक नोक्सान र घरको सुख शान्तिमा पक्कै खलल पु¥याएको हुनसक्छ । यस्ता डबल स्टण्डर्ड व्यक्तिले आफू मातेको कुरा र मातेको अवस्थामा गरेका हिंसा गोप्य नै रहुन् भन्ने चाहन्छन् । यस्ता समस्याहरु खुलेर चर्चा गर्नु र समाधानतिर पहल गर्नु समाजको लागि राम्रै हो नि ! यसैगरी समाजका अन्य समस्याजस्तै फोहोर बिसर्जन, निजी विद्यालयको बिजुली वापत वा मेटेनेन्स वापत आदि शीर्षकका शुल्क, बालबालिकालाई खेल्ने ठाउँको अभाव, बृद्धबृद्धाको समस्या आदिको बारेमा बोल्न मात्र थालियो भने केही हदसम्म भए पनि नियन्त्रण हुन्छ ।
तीज मनाउने प्रत्येक समूहले एउटा–एउटा जिम्मेवारी लिएर काम फत्ते ग¥यो भने समाज विकास पनि हुने र अनाहक खर्च हुने रकमको सही सदुपयोग हुने पनि देखिन्छ । यसबाट समाजका हरेक वर्गमा प्रेम र परस्पर सहयोग बढ्छ । तीज नमनाउने वर्ग पनि उत्साहित भइ समाज विकासको कुरामा अग्रसर कसो नहोला ? एउटा सकारात्मक चलनको सुरुवातले सबैको मन आनन्दित हुनेछ ।